Isticmaalka adeegyada email telefoonka smart waa qayb ka mid ah nolol maalmeedkiisa. Waxay badbaadin waqtigeena iyo cusboonaysiiso ugu dambeeyay ee fariimaha / emails isla laakiin mararka qaarkood marka aan ula kac ahayn waa in si dhaqso ama ay sabab u tahay qaar ka mid ah sabab kale oo aan la tirtiro naga emails muhiim ah xaaladahan oo kale ma heli argagax, mails, kuwaas oo aan si joogto ah la tirtiro ka iPhone oo noqon kara undelete si fudud, waxay ku xafidday galka qashinka ah iPhone iyo aad iyaga undelete karo halkaas ka. Si undelete mails aad tirtiray on iPhone baahan socda kaliya talaabooyinkan.
Tallaabada 1. Tag iPhone Goobta> Mail> Gmail Account ... Inta lagu guda jiro u hubiyo in Messages Archive jeesteen ku sameeyo.
Fiiro gaar ah: Marka aad Jeedsaday oo loo xafidayaa Message kasoo muuqan in ay All Mail folder soo diri doonaa mails aad tirtiray. Haddii aadan gagadin habkaani markaas mails aad tirtiray iyo fariimaha ku talaabsan doonaa in qashinka Folder in aad halkaas tagto si aad u aragto fariimaha aad.
Tallaabada 2. Ka dib markii ay in ay tagaan email-ada iPhone> jiidho> Accounts
Tallaabada 3. Dooro account email taas oo aad rabto in aad undelete email ah. Markaas Dooro All-lada.
Tallaabada 4. Hadda waxaad awoodi doontaa inaad aragto fariimaha archive halkaas. Waxaad dooran kartaa liiska loo baahan yahay iyo waxa ka dib meesha uu doonayo.
Haddii aadan heli aad Mail tirtiray / Messages ee Trash ama fayl All Mail ka dibna waxa ay ka dhigan tahay in aad mails / fariimaha waxaa si joogto ah la tirtiro oo waa inaydaan iyaga undelete karaa qalab iPhone aad.
> Resource > iPhone > Sida loo undelete iPhone Email